Izindaba - Ukuqamba Komkhiqizo ebusweni be-COVID-19
I-COVID-19 Ngenkathi isesabekayo, izikhathi zobunzima eminyakeni edlule ziye zagqugquzela ezinye zezinto ezisungulwe kakhulu emlandweni ezisasetshenziswa nanamuhla. Kusuka kwi-ambulensi eyenziwe ngeNkathi Ephakathi ukusiza abezokwelapha ukuthi bafike futhi bathuthe iziguli ngokushesha, benze iteyipu ngesikhathi seWWII besiza amasosha ukulungisa imishini empintsheni, ngisho nomsebenzi kaIsaac Newton ekubaleni kwasekuqaleni namandla adonsela phansi ngenkathi 'esebenza ekhaya' ngesikhathi seGreat Inhlupho yaseLondon, izifo eziwumshayabhuqe zikazwelonke nezomhlaba wonke kube yisisekelo sezixazululo ezintsha nezobuciko zezinkinga zaleso sikhathi. Ngokuthuthuka kwakamuva ezindleleni zokuhlanzeka, ezinye izindlela zokuzifihla, kanye nokubulawa okuphelele kwamadivayisi ukukugcina ungathinti izindawo ezahlukene, ubhadane lwamanje lwe-coronavirus lukhombise ukuthi alwehlukile.
Enye yezinto eziqhamuke kakhulu ezaqhamuka kulo bhubhane lwamanje kube izinhlobo ezahlukahlukene zokumboza ubuso. Mhlawumbe kukhuthazwe ukuntuleka kokuqala kwemaski elahlwayo kanye ne-N95 enconyiwe ngesikhathi sokuqala, sibone i-spike kubahlinzeki bokuzenzela kanye nezinye izixazululo ezihlanganisa ubuso. Ucwaningo lwamuva luye lwabonisa ukuthi imaski yendwangu eyenziwe ngokwenziwe, eyenziwe ngomthungo yasebenza kakhulu kunama-bandana noma imaski yesitayela sesigaxa (njenge-N95) enamaconsi okukhwehlela ahamba ngamasentimitha angu-2,5 nje kuphela embozwe nge-quilted, uma kuqhathaniswa namamitha amathathu, no-8 amayintshi, ngokulandelana.
Ngenketho yokwenza okokumboza ubuso okwenziwe ngendwangu eyenziwe kabusha, i-Soffio eyakhiwe ngopulasitiki osetshenzisiwe, kanye nezinketho eziningi ezingaphinde zisebenze ezethulwayo, lezi zinketho ezingezinye ezakhiwe ngemuva kwalolu bhubhane zilungele ukuba nomthelela ohlala njalo kwezemvelo nomthelela ekuhlungweni kwesikhathi esizayo namasu wokwenza imaski.Abaqambi beza nendalo ukusiza amaklayenti abo, ikakhulukazi imigoqo nezindawo zokudlela, becela izixazululo zokudala nezisebenzayo zokusiza amabhizinisi ekuvulekeni kabusha.
Noma ngabe kuyizindlela ezintsha, ezilungele imvelo zokukhiqiza imikhiqizo, amadivayisi athuthukisiwe okusigcina sixhumekile, noma ubuchwepheshe obusha sha njenge-NASA's PULSE pendant edlidlizela lapho isandla sakho sisondela ebusweni bakho, ubhadane lwe-coronavirus luphefumulele imibono ethile yokudala neyintsha. Kuzoba mnandi ukubuka lezi zinto ezintsha zithuthuka futhi ubone ukuthi yini engathuthuka ibe yi-ambulensi noma i-tape tape yekusasa.
I-Eye on Innovation ukubheka njalo ngenyanga kubuchwepheshe obusha, imikhiqizo, kanye nezitayela.